Taariikhda Falastiin - Waadinews | Somali News and Entertainments
Falastiin waxay ku taalla Kuunfur Galbeed qaaradda Aasiya, waxay u dhaxaysaa Masar, Suuriya iyo Urdun. Falastiin waa dhulkii saddexda diimood ee samaawiga ah, waa ubucdii ilbaxnimooyinkii hore. Haddaba Falastiin waxay soo martay marxalado kala gedisan waxaana ka soo taliyey dawyow kala jaad ah.
1-Xukunkii Kancaaniyiinta: Muddo haatan laga joogo 3 kun oo sannadood waxaa Falastiin soo gaadhay muhaajiriin Carab ah oo loo yaqaanay Kancaaniyiin oo kasoo kici timay Jasiirad-la-moodda Carabta. Falastiin xilligaas waxa ahayd meel lama dagaan ah oo ayna cidina ku noolayn. Kancaaniyiintu waxay degeen Daanta Galbeed oo ku taalla Galbeedka webiga Urdun oo imika kala sooca Falastiin iyo Urdun. Xilligaas Falastiin waxaa loo yaqaanay “dhulka Kancaan”.
2-Xukunkii Faraacinada: Qarnigii 16aad ee (miilaadiga kahor) waxaa Falastiin qabsaday Faraacinadii ka talinjiray Masar. Cibraaniyiintii ayaa Faraacinada ka qabsaday Falastiin, gaar ahaan xilligii uu talada hayey boqorkii Masar ee Akhenaten. Faraacinadii ayaa mar labaad dib u qabsaday Falastiin gaar ahaan xilligii boqor Seti I.
3- Xukunkii Giriigga: Falastiin waxay hoostagtay xukunka Giriigga kaddib markii uu qabsaday Alexander-kii Waynaa. Sannadkii 323 (Miilaadiga kahor) waxaa Falastiin qabsaday Ptolemy isaga oo hoosgeeyay maamulkiisii Masar. Sannadkii 198 Miilaadiga kahor waxaa qabsaday Seleucus I Nicator oo ku daray boqortooyadiisii ka arrimin jirtay Suuriya.
4- Xukunkii Roman iyo Byzantine: Sannadkii 63 M.K Falastiin waxay hoostagtay xukunkii Roman-ka. Muddo kaddib imbiraadooriyaddii Roman-ka ayaa u kala qaybsantay Bari iyo Galbeed, iyada oo Falastiin raacday qaybtii Bari oo la odhan jiray Byzantine, muddo laba qarni ah ayey hoosjoogtay Byzantine.
5- Xukunkii Faarisiyiinta (Persian-ka): Falastiin waxaa qabsaday boqorkii Persian-ka ee Khosrow II kaas oo burburiyey muqaddasaatkii diiniga ahaa ee ku yaallay magaalada Qudus. Xataa waxaa la sheegaa in Yahuuddu ay la safteen Persian-ka si ay uga aargoostaan Kirstaanka. Byzantiniyiintii ayaa soo rogaal ciliyey iyada oo boqorkii Heraclius uu dib u qabsaday Falastiin sannadkii 628 Miilaadiga. Sidoo kale waxaa uu Persian-ka dib uga soo celiyey Mucatabkii weynaa.
6-Xukunkii Islaamka: Markii ugu horraysay Nebi Muxammed (SC) ayaa sii maray magaalada Qudus markii la dheelminayey. Balse Cumar Bin Khaddaab ayaa si rasmi ah u furtay magaalada Qudus, Cabbaasiyiintu waxa ay ka talinayeen Falastiin 128 sannadood. Salaajiqadii ayaa qabsaday sannadkii 1071, taasina waxa ay sababtay in isku dhacyo milatari ay dhexmaraan Cabbaasiyiintii, Qaraamidadii iyo Faadumiyiintii.
Falastiin waxay haddana dib u hoostagtay Xukunkii Islaamiga ahaa, Xilliyadii Tuulooniyiintii, Ikhshiidiyiintii iyo Faatimiyiintii waxaa Falastiin laga maamuli jiray dhinaca Masar. Falastiin ayaa haddana u gacan gashay Franks-kii oo 5 qarni ka talinayey.
Hoggaamiyihii Salaaxu Diin Al-Ayuubi ayaa dagaalkii Xiddiin (Hittin) Falastiin kaga qabsaday Franks-kii sannadkii 1187 Miilaadiga. Balse dib ayey haddana u qabsadeen Franks-ku geeridii Salaaxu Diin kaddib, iyada oo markii ay haysteen 11 sannadood uu dib u gala wareegay Boqor Saalix Najmu Diin Ayuub sannadkii 1244.
Isla sannadkii 1244 waxaa Falastiin ku soo duulay Tataarkii balse waxaa iska caabbiyey Muslimiintii Mamaaliikta oo Tataarkii ugu awood sheegtay dagaalkii Caynu-Jaaluut. Intaa kaddibna Falastiin waxay hoostagtay xukunkii Mamaaliikta oo ka jiray Masar iyo Shaam. Sannandkii 1516 Miilaadiga waxaa Falastiin qabsaday Cusmaaniyiintii oo ay gacanta ugu jirtay muddo 4 qarni ah.
7-Xukunkii Ingiriiska: Sannadkii 1917 Waxaa Falastiin qabsaday ciidankii Ingiriiska xilligaasna waxaa caasimad u noqtay magaalada Qudus. 8- Qabsashadii Israa’iil: Isla sannadkii uu Ingiriisku ka baxay Falastiin oo ahaa 1948, Yahuudda ayaa ku dhawaaqday inay dawlad Israa’iil la yidhaah ka dhiseen Falastiin, Intaa kaddib Falastiin waxay noqotay furin dagaal, waxaana ugu darnaa dagaaladii ka dhacay xilligaas dagaalladii 1948 iyo 1967, ilaa iyo maantana Israa’iil ayaa xoog ku haysta dhulka Falastiin.